Waxbarashada Electromechanics TSO Antwerp - GO! SPECTRUM SCHOOL
spectrum School > koorsooyinka our > Dhaqanka & Mechanics > Electromechanics
tababarka Barashada + Xirfadaha (TSO) ee GO! Spectrumschool, Ruggeveld Campus
De koorsada buuxda ee TSO Electromechanics waa jihada fikradda ah, taas oo xisaabta, farsamooyinka iyo korontada ay yihiin kuwo si fiican looga wada hadlo. Meelaha lagu tababaro, robotics, otomaatika iyo tiknoolajiyada kumbiyuutarada gacanta lagu hayo ayaa ah bartamaha. Waxaa jira inta badan mashruuca shaqeeyey. Tani waxay la socotaa layliyo iyo barashada goobta shaqada.
ah 2e degree Electromechanics siyaabo badan ayaa loo bixiyaa iyada oo loo diyaargaroobayo sii xoojinta ama doorashooyin khaas ah oo dheeraad ah ee heerka saddexaad. Waxaad baran doontaa qalabka kala duwan, qalabka iyo farsamooyinka. Waxaad baraneysaa qaabeynta dhismayaasha iyo qalabyada, diyaariyaan hababka iyo kormeerida software-ka xirfadeysan. Adiga oo ku shaqeynaya adiga oo baranaya inaad baratid fikradda asalka ah ee qiimaha.
ah 3e degree Electromechanics Sida korontada, waxaad baraneysaa inaad kormeerto, dayactirto oo dayactirto qalabka warshadaha iyo nidaamyada wax soo saarka. Waxaad ka heleysaa adduunka mashiinka iyo koronto-dhaliyaha, otomaatikada, kontoroolka PLC, ... Waxaad baraneysaa sida mashiinnada loo xakameeyo oo loogu qaabeeyo habka kombiyuutarka (CNC, CAD-CAM).
Inta lagu jiro Layli waxaad heleysaa fursad balaadhan oo ah waxa aad taqaanid oo aad ku codsan karto ficil ahaan. Waxaan leenahay mid aad u fiican wada shaqeynta shirkadaha ka badan Atlas Copco & Umicore inaad ku takhasusto oo aad sare ugu qaadato goobta shaqada.
Waxaad horeyba ugu jiri kartaa Shahaadada 1e ka bilow mid tababarka hordhaca ah STEM. Halkaa ka sii dheerow Heerka Darajada 1e.
Ma jeceshahay sayniska iyo farsamada? Ma u shaqaysaa si sax ah oo madaxbannaan, miyaad isha ku haysaa faahfaahin?
Looma baahna waxbarashada hore ee khaaska ah, laakiin saldhiggaaga xisaabta waa inuu ahaado mid xoogan. Aqoonta aasaasiga ah ee fikradaha jireed qaarkood ayaa loo baahan yahay. Waxaanu kaa rajeyneynaa in aad si xiiso leh u barato mashaariicda dhamaystiran. Fahamka farsamada waa muhiim.
Tababarka horudhaca ah ee hordhaca ahi waa Heerka Darajada 1e
"Ka bacdi waxbarashadayda GO! Iskuulka Spectrumschool Waxaan helay xirfadle baaskiil xirfadeed. Muddo intaa waxaan u shaqeeyay sidii injineer robot. Hadda waxaan u shaqeeyaa sida kontaroolaha mashruuca. Waxaan badiyaa barnaamijka PLCs iyo fulinta qalabka. Xirfadaha aan dhigo GO! Iskuulka Spectrum Waxan bartay maalin kasta shaqadayda. "
Younes, arday hore, hadda injineer Kanada ah
Kadib shahaadada 3e Electromechanics waad heleysaa Dibloomada waxbarashada dugsiga sare. Koorsadani waxay ku siineysaa aasaas adag si aad u bilowdo daraasad sare oo ku saabsan edebta. Waxaad u shaqeyn kartaa sidii injineernimo, rakibo, farsamayaqaan dayactir, ama farsamo, laakiin waxaa jira fursado kale oo badan. Waxaad ka heli doontaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan daraasaddo dheeraad ah kaddib kooraskan halkan.
Si kastaba ha ahaatee, shahaadadani waxaad horey u haysataa fursado badan oo shaqo ee shaqooyinka yar yar sida shaqada korantada ama dayactirka dayactirka.
Kala hadal halkan miisaska casharrada ee tababarka TSO Electromechanics: